Những tựa sách hay nhất của Nguyễn Nhật Ánh khuyên đọc trong đời | Anybook.vn - Anybook
Những tựa sách hay nhất của Nguyễn Nhật Ánh khuyên đọc trong đời | Anybook.vn
Amin’izao fotoana izao, tsy dia misy mpanoratra firy ho an’ny literatiora mpianatra ary lasa kisary amin’ny literatiora vietnamiana maoderina i Nguyen Nhat Anh. Ny asa mifandray amin’ny anarany dia tena tian’ny ankizy sy ny tanora.
Ny asa soratr’i Nguyen Nhat Anh dia miteraka fahatsiarovana madio sy milamina, fihetseham-po marina izay toa hitan’ny mpamaky amin’ireo teny ireo. Angamba izany no mahatonga ny sosona lalina misy dikany ao anatin’ireo asa ireo dia mety ho an’ny rehetra, na tanora na antitra. Vao haingana, ny fanintonana avy amin’ny pejin’ny boky dia nanosika ireo mpamokatra sarimihetsika hiara-hiasa hampifanaraka ny sanganasany amin’ny efijery, toy ny “I See Yellow Flowers On The Green Grass” izay navadika ho sarimihetsika ary nahazo loka sarobidy maro.
Ao anatin’ny sahan’ilay lahatsoratra, tiako ny hampahafantatra anareo ny bokin’i Nguyen Nhat Anh izay voasokajy ho tsara indrindra sy miavaka indrindra amin’ny mpamaky:
1 Omeo tapakila ho amin’ny fahazazana aho
2 Tovovavy omaly
3 Mahita voninkazo mavo eo amin’ny ahitra maitso aho
4 Alika kely mitondra raozy harona
5 Indray andro nisy tantaram-pitiavana
6 Beto aho
7 Mitomany amin’ny hazo
8 Ny zavatra hafa tokony hotsaroana
9 Misy saka roa mipetraka eo am-baravarankely
10 Balloons mankany an-danitra
11 Zazalahy sahirana
12 Raozy avy any an-tany hafa
13 Tanora hazo akondro manao kiraro maitso
14 Voromailala tsy mandefa mailaka
15 Toeram-piompiana voninkazo volamena
16 Maso manga
Omeo tapakila ho amin’ny fahazazana aho
Jereo ny vidin’ny varotra
Ny tantara “Omeo tapakila ho an’ny fahazazana” no asa farany nataon’ny mpanoratra Nguyen Nhat Anh. Ny mpanoratra dia manasa ny mpamaky haka lamasinina hiverina hitsidika ny fahazazana sy ny fisakaizana mahafatifaty misy ankizy 4. Ny lalao fahazazana mahafatifaty, ny toetra marina, mahitsy ary manan-tsaina, ny nofinofin’ny fahafahana ao am-po … dia mahatonga ny boky ho afaka mampiahiahy ny ray aman-dreny ary avy eo dia mifoka rivotra. Tsy mety ho an’ny tanora mpamaky ihany, ny boky dia mety hahasarika sy tena ilaina ho an’ny olon-dehibe amin’ny fifandraisany amin’ny zanany ihany koa.
Nguyen Nhat Anh nanoratra ilay tantara lava The Girl From Omaly tamin’ny 1988 (navoaka tamin’ny 1989 ny boky). Ity no asa faharoa nosoratan’ny mpanoratra momba ny fandrosoan’ny taona, taorian’ilay tantara lava tsy misy tokony hotsaroana. Manodidina ny 30 taona taorian’ny nahaterahany, ilay boky dia mitahiry mandrakizay ny fotoanan’ny mpianatra tsy manan-tsiny izay mihalefy ankehitriny.
Ny asa dia mitantara ny fitiavan’ny mpianatra an’i Anh Thu lehilahy mpianatra iray sy ny mpiara-mianatra aminy Viet An. Rehefa nifindra avy tao an-tanàna nankany amin’ny sekoly ambaratonga faharoa any ambanivohitra ny tovovavy mahafatifaty iray, dia tohina tamin’ny fitiavana ilay tantaram-pitiavana malaza “Tho Than” Thu. Ny fitiavana mamony toy ny masoandro maraina. Miezaka mafy manenjika ny namany vaovao i Thu, saingy mbola ao am-pony ny fahatsiarovana ny fisakaizana tamin’ny fahazazany tamin’ny namany kely Tieu Li.
Mahita voninkazo mavo eo amin’ny ahitra maitso aho
“Mahita voninkazo mavo eo amin’ny bozaka maitso aho” ilay tantara lava farany nataon’ny mpanoratra izay vao avy nahazo ny Loka Literatiora ASEAN Nguyen Nhat Anh dia nahazo zon’ny mpamorona avy amin’ny Young Publishing House ary nampahafantarina ny mpamaky manerana ny firenena.
Ny boky dia momba ny fahazazana mahantra ao amin’ny tanàna ambanivohitra, ankoatry ny lohahevitra fitiavana mahazatra, sambany i Nguyen Nhat Anh no nampiditra olon-dratsy sy nametraka olana ara-moraly toy ny tsy firaharahiana. , ratsy. Ny toko fohy 81 dia tantara kely 81 momba ny ankizy nitranga tao amin’ny tanàna iray: tantara momba ny saobakaka, angano, tantara momba ny andriambavy sy ny andriana, ankoatra ny tantaran’ny hanoanana, ny hain-trano, ny tondra-drano,… Mahita voninkazo mavo amin’ny maitso aho. ahitra” dia mampanantena fa hitondra zava-mahaliana ho an’ny tanora mpamaky sy olon-dehibe miaraka amin’ny feo mazava, tsy manan-tsiny ary tsotra ho an’ny ankizy ary antsipiriany mahaliana, tsy ampoizina ary mampihetsi-po. animation manerana ny pejy 300 mahery amin’ny boky. Ny boky, noho izany, dia manana fientanentanana, fanintonana ary fanintonana izay tsy azo odian-tsy hita.
Alika kely mitondra raozy harona
Ny alika kely miaraka amin’ny harona raozy no asa farany nataon’ny mpanoratra manampahaizana manokana amin’ny fanoratana ho an’ny tanora Nguyen Nhat Anh, nanaraka ny Seven Steps to Summer, nahita voninkazo mavo teo amin’ny bozaka maitso aho… niteraka onja tao amin’ny tsenan’ny boky tamin’ny 2015. .
Boky toko 5 misy tantara 86 tena mahaliana sy mahatsikaiky momba ny alika 5 5 karazana 5 toetran’ny fianakaviana iray misy 3 izay tia azy ireo saingy amin’ny fombany. Ny tantara momba ny fisakaizana teo amin’izy ireo, teo amin’izy ireo sy Ni, ny ray aman-dreniny, ny vahiny tonga tao an-trano … dia tena mitondra tontolo mazava, seho fiainana mahafatifaty izay manintona ny zatovo.
Boky mahaliana nosoratana ho antsika rehetra: ankizy sy olon-dehibe. Ny fiainan’ny alika kely 5: Haili, Bato, Suku, Emme ary Kisoa dia naverina ho fiainan’ny tsirairay: fisakaizana, fitiavana, firehetam-po, herim-po, tahotra, ary nofinofy…
Indray andro nisy tantaram-pitiavana
Indray andro dia nisy tantaram-pitiavana izay tantara mampihetsi-po rehefa nifankatia ny olona, ​​​​ny faniriana ny hasambarana mafana sy milamina; Sa resaka olona telo tsotra izao – ianao sy izaho ary io olona io…?
Rehefa manokatra ilay boky, ny mpamaky dia ho vavolombelon’ny rivotry ny fitiavana mikoriana toy ny tara-masoandro eo amin’ny tarehin’ny ririnina amin’ilay tovovavy; ny oroka mamy voalohany, ny fihina voalohany, ny ranomaso ary ny famihin’ny fitiavan’ny olon-tiana iray… Ary ny mpamaky dia hahita ny valiny, ho an’ny tenany.
I Am Beto no asa farany nataon’ny mpanoratra manokana momba ny fanoratana ho an’ny tanora nosoratan’i Nguyen Nhat Anh. Nahafantaran’ny mpamaky maro azy tamin’ny alalan’ny asa mahazatra toy ny Little Devil, Golden Flower Farm, Balloons in the Sky, The Girl From Omaly… ary andian-dahatsoratra roa Kaleidoscope sy Tales of Lang Biang . Ho an’i Beto aho dia sambany izy no nanoratra asa tamin’ny fitantarana alika. Amin’ity angano ity dia jerena amin’ny fomba mazava izao tontolo izao, saingy tsy misy dikany ny dikany lalina, mampieritreritra ny mpamaky. Azo antoka fa tsy ho an’ny ankizy ihany izany.
Mitomany amin’ny hazo
Ny fiandohana dia fialan-tsasatra amin’ny fahavaratra ao amin’ny tanàna amoron-dranon’ny tantaram-pitiavana miaraka amin’ireo mpilalao dia tanora lehibe izay manana lalao mahafinaritra sy tsotra tsy tambo isaina izay hapetraka ao am-pony mandrakizay. Mitovy amin’ny fitiavanao voalohany any an-tsekoly ve ny fitiavana voalohany madion’ny tovovavy Turtle sy mpianatra any an-tanindrazana mianatra ao an-tanàna? Ary ny fomba fifankatiavan’izy ireo mangingina, tsy sahy mifampalahelo, maniry ny fahasambarana ho sempotra no tena tantara?
“Mampihoron-koditra miaraka amin’ny
Divay vera eny an-tanana
Maitso miaraka amin’ny
Avo ny lanitra mandritra ny arivo andro
Midina ny volonao
Mitombo haingana miaraka amin’ny
Baby anio tolakandro”
Hotarihin’ny mpanoratra tsy misy olana amin’ny fahatsapana fitiavana mitomany ianao. Hahatsiaro ho sambatra ianao satria miaina amin’ity fiainana ity, tia ny fon’ny olona… tsara tarehy fotsiny izy rehetra.
Miaraka amin’ity boky ity, nomena fanomezana sarobidy avy amin’i Nguyen Nhat Anh indray ny mpamaky: finoana ny tena zava-tsoa eo amin’ny fiainana.
Ny zavatra hafa tokony hotsaroana
Ireo no fahatsiarovana ny andro nianaran’i Chuong, fony izy niditra voalohany tao Saigon ary nizatra tamin’ny fiainana an-tanàn-dehibe. Fifandraisana amin’ny fisakaizana toa tsy misy dikany ireny fa mifikitra mandritra ny androm-piainany. Ny fiainana feno korontana dia nampihetsi-po ny tsirairay avy amin’ny toerana iray, saingy tao anatin’ny am-polony taona maro, ireo fahatsiarovana ireo dia nanintona an’i Chuong hiverina amin’ny fotoana tokony hotsaroana.
Misy saka roa mipetraka eo am-baravarankely
Ny mpilalao fototra voalohany dia antsoina hoe Bear.
Ny toetra faharoa dia Ty Hon.
Ny toetra fahatelo, izay ny anarany dia…; Ankoatra izany, ny tarehin-tsoratra fahefatra, izay ny anarany dia…
Raha te hahalala ny antony mahatonga ny Bera akaiky ny Tiny dia sokafy azafady ny boky.
Mifanakaiky i Bear sy Tiny ka afaka mifampizara fifaliana sy alahelo ao anatin’ny fotoanan’ny fahalemena sy ny tebiteby ary ny fiahiana, mifanampy amin’ny sakafo ka hatramin’ny “paikady” ho amin’ny fahavelomana maharitra.Inona no atao hoe fisakaizana? Inona no atao hoe sipa? Inona no atao hoe fitia?
Ny saka sy ny totozy dia milaza amintsika tantara kely maro, mandefa hafatra fa ny fitiavana dia manana hery lehibe, afaka manao karazana zavatra miavaka rehetra eo amin’ny fiainan’ny karazany rehetra.
Ny boky tantara dia manana hatevin’ny antonony, sary 67 nataon’ny mpanakanto Do Hoang Tuong dia mazava tsara amin’ny fihetsehan’ny saka rehetra, ilay Bear tia saka, manintona sy mahafatifaty ny tantara, miaraka amin’ny tononkalo fitiavana romantika. …
Mba vakio azafady, mba hahitana, ny fomba nanoratan’i Nguyen Nhat Anh ny tantaran’ny saka sy totozy amin’ny fomba miavaka.
Balloons mankany an-danitra
Noho ny zava-misy, matetika dia voatery nanampy ny reniny tamin’ny fivarotana vatomamy ivelan’ny ora fianarana sy zatra ny fiainana eny an-dalana. Tany izy dia nanao namana tamin’ny mahantra ary nianatra zavatra maro izay tsy hita tao amin’ny boky sy ny sekoly. Ilay tovovavy tsy manan-tsiny sy manonofy mivarotra balaonina, matetika manampy an’i Thuong hanala ny heloky ny mahantra sy hiaina amim-pahatokiana.
Tsy haiko ny momba anareo fa tsy mba nikarakara olona mihitsy aho. Mbola tsy vita ny fikarakarana ny tenako. (Tao am-piandohan’ny tantara dia efa namboraka toy izany ny mpilalao fototra, mandre OLANA). Raha ny marina, mbola ny feon’ny mpanoratra ny “mihomehy”, ny fomba mahagaga ny mpanoratra amin’ny fametahana sy famahana ny bokotra, mitarika antsika amin’ny olana iray mankany amin’ny iray hafa. Vakina sarotra nefa mahaliana.
Raozy avy any an-tany hafa
Ao amin’ny tantara, Ngu, Khoa ary Hoa le dia samy tia ny mpiara-mianatra aminy Gia Khanh. Inona no hataon’ilay tovovavy narahin’olona telo? Inona no ataon’izy telo lahy mba “handresy”. Ny tena mahaliana dia ny mpanoratra dia saika mamerina ny fotoanan’ny mpianatra amin’ny fiteny ankehitriny mba hahitan’ny mpamaky ny silhouette azy manokana ao.
Tanora hazo akondro manao kiraro maitso
Tsara foana ny fahatsiarovana ary indrindra fa aza mamadika. Ity tantara ity dia momba ny fahatsiarovana. Misy ny tahotra zaza izay efa niainan’ny tsirairay, ary misy ny vibration manjavozavo izay ampy hahatonga anao ho menatra. Mitsonika ny fialonana, mamely ny fo ny alahelo, ary ny nofy mazava sy mamy dia mitondra fifaliana, fanantenana…
Ny tantara lava farany momba ny mpanoratra Nguyen Nhat Anh tamin’ity indray mitoraka ity dia manana hira tantaram-pitiavana izay mety ho tian’ny rehetra, ny ambiny dia teny mitondra fahasambarana. Hanolo-tena ho an’ny tanora, sy ireo nandalo ny fahazazany.
Voromailala tsy mandefa mailaka
Ny tantara dia manomboka amin’ny taratasy olom-pantatra ao amin’ny latabatr’i Thuc, ao amin’ny trio Xuyen, Thuc ary Cuc Huong.
Ny taratasy avy amin’ny fo dia nanaitra ny fahalianan’izy telo mianadahy, ary voasariky ny lalao niaraka tamin’ilay olona miafina izy ireo, nisintona tsikelikely an’i Wood Judge, ilay lehilahy ratsy tarehy ratsy tarehy tao amin’ny kilasy izay mpanolotsaina sy manampy amin’ny famoronana tononkalo. Ny fikarohana dia mitarika ny olona amin’ny tsy fifankahazoan-kevitra mahatsiravina ary na dia ny tsy ampoizina mahafinaritra aza. Ary tara loatra ny tsy ampoizina farany. Nahoana? Avelao ny mpamaky hahita ny tenany.
Toeram-piompiana voninkazo volamena
Navoaka tao amin’ny gazety Muc Tim ny tantara. Mahantra ny fianakaviana, tsy mianatra tsara, nefa manana namana maro. Tia voninkazo, i Chuan dia namboly zaridaina voninkazo mavo ny tenany. Misy ankizivavy kely atao hoe Thao, mpifanolo-bodirindrina izay matetika tonga milalao miaraka amin’i Chuan mba hikarakara voninkazo. Indray andro, nangataka raozy i Thao, nisalasala i Chuan satria nihevitra izy fa ilay olon-tiany ihany no nomena raozy… Tamin’izany fotoana izany, dia raiki-pitia tamin’i Cam Pho i Chuan – sipa iray tany am-pianarana niaro azy. Ary…
Asa nofidian’ny maro ho tsara indrindra amin’ity mpanoratra ity. Misy asa adika sy ampidirina ao Japana (araka ny vaovao azo avy amin’ny gazety)… Noho ny fahadiovan’ny fihetseham-po iray, noho ny fiafaran’ny tena mampalahelo nefa mbola feno fifaliana sy alahelo ary zavatra mifangaroharo ny tantara manontolo. tsy araka ny nandrasan’ny rehetra ny fiafarany). Satria koa, manga ny maso… taona maro lasa izay (araka ny tononkalon’ny hira).
Mety ho liana amin’ny:
Previous: Công thức tính Chu vi Diện tích Hình Thang chuẩn toán học Euclid | Anybook.vn
Next: Mô tả công việc Thủ Kho | Anybook.vn